प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका सांसद नवराज सिलवाल कसरी पुगे संसद भवनमा ? – Setosurya
शनिबार २९, मङि्सर २०७५
काठमाडौँ — प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सांसद नवराज सिलवाल संघीय संसद भवनभित्र पुगेका छन् । एमाले–माओवादीतर्फबाट संघीय संसदमा निर्वाचित सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा भाग लिन सिलवाल संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका हुन् । उनी शनिबार बिहान करिव पौने ११ बजेतिर भवन पुगेका थिए । प्रशिक्षण कार्यक्रम ११ बजेलाई बोलाइएको थियो ।
भवनभित्र उनी एक्लै गएका थिए। संसद भवन छिर्नुअघि उनले हात हल्लाएका थिए। कोट, सर्ट, पाइन्ट र ढाका टोपीमा सजिएर उनी संसद भवन पुगेका थिए।
पार्टी एकता गर्ने गरी अघि बढिरहेका दुई पार्टीले संसदीय गतिविधिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागेका हुन्। एमाले अध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रशिक्षणमुलक मन्तव्य दिने छन्। संघीय सांसदहरुको शपथ सोमबार हुँदैछ।
यस्तो थियो राजा विरेन्द्रसँग ओलीको भेट(दुर्लभ तस्बीरसहित)
प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २७ मा बिश्वासको मत लिँदै
दिदी बहिनीले नबौं महिला महोत्सव गर्ने
विकास राष्ट्रिय एकिकृत पशु तथा कृषि सहकारी संस्थाको चौंथो साधारण सभा सम्पन्न…..
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ को अध्यक्षमा कोइराला
सुन किन्दा ठगिनु होला यी हेर्नुहोस्- सुन किन्दा भुल्नै नहुने ५ कुरा
राज्यको ढिकुटी रित्याउन यस्तोसम्म गर्ने भए जनप्रतिनिधीले………
महिनौं संसद अवरोध खेप्छु, तर राजीनामा दिन्नँ : प्रचण्ड
पर्वत महोत्सवको तयारी ९० प्रतिशत पुरा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने
नेकपामा फेरी असहमती, किन रोकियो स्थायी कमिटिको बैठक ?
यस्तो आयो एमालेको अन्तिम समानुपातिक सुचि ! ४१ महिला, पुरुष २ जना मात्रै (नामावली सहित)
कालीगण्डकीकाे बालुवा ठूलालार्इ चैन, सानालार्इ एेन ! बालुवा मजदुर अान्दाेलित……
समाचार | शनिबार २२, मङि्सर २०७५